အရမ်းအရေးကြီးပီး လူတိုင်းသုံးလို့သတိထားနိုင်အောင် ရှယ်ပေးကြပါ - Tameelay
အရမ်းအရေးကြီးပီး လူတိုင်းသုံးလို့သတိထားနိုင်အောင် ရှယ်ပေးကြပါ
လျှပ်​စစ်​နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ ​ရေ​နွေးအိတ်​​လေးကို သတိ​လေးထားပြီး သုံးကြပါ
​ရေး​နွေးအိတ်​​လေးကို ​ရေ​​တွေ​​နွေးလာေ​အာင်​ အားသွင်း​နေရင်း ​ ပေါက်​ထွက်​ပြီး မျက်​လုံးတစ်​ဝိုက်​, မျက်နှာ, နား, ဆံပင်​ဦး​ရေပြား အထိ မျက်​နှာတစ်​ခြမ်းလုံး ​ရေ​ပူ​တွေအကုန်​​လောင်​သွားတယ်​…
ခါတိုင်းဆိုရင်​ ဒီတိုင်းပဲ အားသွင်းထားတာ ​ရေ​တွေပူလာရင်​ သူ့အလိ်ုအ​လျောက်​ခလုတ်က​ပိတ်​သွားတယ်​…..
အရင်​လိုပဲထင်​ခဲ့မိပြ်ီး ဒီတိုင်းပဲ ဂရုမစိုက်​ပဲ ထားခဲ့မိတယ်​…
ကံဆိုးချင်​​တော့လဲ ​ရေ​နွေးအိတ်​​ပေါက်​ကွဲပြီး မျက်​နှာ​လေး​တော်​​တော်​များများ ထိခဲ့ရပြီ​လေ…
ကျွန်​မလိုမဖြစ်​​အောင်​လို့ အားလုံးကို သတိ​ပေးလိုက်​တာပါ…
မထင်​မှတ်​ပဲ ဘာမှမဖြစ်​တတ်​ဘူးထင်​ပြီး ​ပေါ့ဆခဲ့တဲ့အတွက်​ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်​ခဲ့ရပြီ​လေ…
🏥 အခု​တော့ ​ဆေးကုသမှုခံယူလျက်​ပါ…..
မဖြစ်​သင့်​တာ မဖြစ်​​အောင်​ အားလုံးသတိ​လေးထားကြဖို့ ​ စေတနာနဲ့ ​ပြောပြလိုက်​ပါတယ်​….
Credit@ Nang Shally
အရမျးအရေးကွီးပီး လူတိုငျးသုံးလို့သတိထားနိုငျအောငျ ရှယျပေးကွပါ
လြှပျ​စဈ​နဲ့တှဲသုံးရတဲ့ ​ရေ​နှေးအိတျ​​လေးကို သတိ​လေးထားပွီး သုံးကွပါ
ရေး​နှေးအိတျ​​လေးကို ​ရေ​​တှေ​​နှေးလာေ​အာငျ​ အားသှငျး​နရေငျး ​ ပေါကျ​ထှကျ​ပွီး မကျြ​လုံးတဈ​ဝိုကျ​, မ​ကျြနှာ, နား, ဆံပငျ​ဦး​ရပွေား အထိ မကျြ​နှာတဈ​ခွမျးလုံး ​ရေ​ပူ​တှအေကုနျ​​လောငျ​သှားတယျ​…
ခါတိုငျးဆိုရငျ​ ဒီတိုငျးပဲ အားသှငျးထားတာ ​ရေ​တှပေူလာရငျ​ သူ့အလျိုအ​လြောကျ​ခလုတျက​ပိတျ​သှားတယျ​…..
အရငျ​လိုပဲထငျ​ခဲ့မိပျွီး ဒီတိုငျးပဲ ဂရုမစိုကျ​ပဲ ထားခဲ့မိတယျ​…
ကံဆိုးခငျြ​​တော့လဲ ​ရေ​နှေးအိတျ​​ပေါကျ​ကှဲပွီး မကျြ​နှာ​လေး​တျော​​တျော​မြားမြား ထိခဲ့ရပွီ​လေ…
ကြှနျ​မလိုမဖွဈ​​အောငျ​လို့ အားလုံးကို သတိ​ပေးလိုကျ​တာပါ…
မထငျ​မှတျ​ပဲ ဘာမှမဖွဈ​တတျ​ဘူးထငျ​ပွီး ​ပေါ့ဆခဲ့တဲ့အတှကျ​ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျးပဲဖွဈ​ခဲ့ရပွီ​လေ…
🏥 အခု​တော့ ​ဆေးကုသမှုခံယူလကျြ​ပါ…..
မဖွဈ​သငျ့​တာ မဖွဈ​​အောငျ​ အားလုံးသတိ​လေးထားကွဖို့ ​ စတေနာနဲ့ ​ပွောပွလိုကျ​ပါတယျ​….
သင်ဟာ တနင်္ဂနွေ သမီးနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့ သူ့ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ တနင်္ဂနွေ သမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် စိတ်သဘောပြည့်ဝကြတယ် စိတ်ထားကောင်းကြတယ် တနင်္ဂနွေ သမီးတွေက သူ့ရဲ့ချစ်သူကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားကြတယ် သူ့ချစ်သူကိုစိတ်ညစ်စေမယ့် အပြုအမှုမျိုးကို လုပ်လေ့မရှိပူး တကယ်လို့ သူ့ချစ်သူက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်နေရင်လည်း ပျော်ရွှင်လာအောင် လုပ်ပေးတတ်ကြတယ် ဒါကလဲ …
သုံးနှစ်သမီးကို သားမယားပြုကျင့်လို့ လူပုံအလယ် ကရိန်း နှင့်မပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်သလို မြန်မာပြည် လဲဖြစ်သင့်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း ဒီလိုလုပ်ပေးရမယ် သုံးနှစ်သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားအား လူပုံအလယ်တွင် ကွပ်မျက် ယီမင်နိုင်ငံမှာ ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးတဦးကို မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတဦးကို လူပုံအလယ် သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ပြီး ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေဟာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် မူဟာမက်ဒ် အယ်လ်မာဂရာဘီကို ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကျည် …
ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းလမ်းများ နွေရာသီရောက်လာနဲ့အမျှ ညနေခင်းတွေဆို အပြင်မှာ လေညှင်းလေး ထွက်ခံရင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခြင်ကိုက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရကြပါတယ်။ ခြင်ကိုက်တဲ့အခါ ယားယံတာ၊ ယောင်ရမ်းတာတွေအပြင် များစွာသောရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ခြင်မကိုက်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကြက်သွန်ဖြူစားပါ …